Kanjani, nini lapho uqala ukunikeza izingane zokuheha? Le mibuzo iphakama ngokuphelele phambi komama wonke usana. Kubonakala sengathi umama udla ubisi noma ingxube eguquguqukayo, futhi kahle, yini enye ayidingayo, ngakho uyisana. Ngempela, ubisi lomama yikudla okuwusizo kakhulu futhi okudingekile komntwana futhi akufanele kuphuthunyiswe ukuphakela ingane ngokudla kwabantu abadala. Kodwa isikhathi eside kakhulu ukubambezela ukufakwa kokudla okuhambisanayo akufanele kube.
Ngakho-ke, kungani kuyadingeka ukwethula ukudla okuhambisanayo?
Okokuqala, ukukhanga kunomthelela ekwakheni uhlelo lokugaya nokusebenza kwamathumbu emntwaneni, kushukumisa ukuthuthukiswa komsebenzi we-enzymatic and digestive wesistimu yokugaya ukudla.
Okwesibili, ngokukhishwa kwamaprotheni omzimba, izilwane kanye nemifino, ama-carbohydrate ahlukene, ama-fatty acids, amafayili okudla futhi, ekugcineni, amavithamini, adingekayo ekukhuleni nasekuthuthukisweni kwawo, awela emzimbeni wengane.
Okwesithathu, ngenxa yenkanuko, ingane ifunda ukuhlafuna nokugwinya ukudla, okuqinile kakhulu ekuziphatheni kunobisi, ijwayele ukunambitheka okusha nokuzwa okuthinta inhliziyo.
Futhi, yesihlanu, kukhona ushintsho kancane kancane ekudleni komndeni etafuleni elivamile.
Vumelana, zonke izizathu ezingenhla zifanelwe ukunakekelwa.
Kuyadingeka nini ukwethula umntwana ekudleni okusha?
I-World Health Organization (WHO) incoma ukuthi uqale ukondla ingane kungekudala kunezinyanga ezingu-6, uma ingane isondla ngokwenzayo, khona-ke kancane kancane. Yiqiniso, wonke umama uxazulula le nkinga ngokwayo, kodwa nansi okumele uyibheke. Ukuhleleka kungaqaliswa uma:
-Umntwana waqala ukulinganisa kabili ngesikhathi sokuzalwa
-Umntwana angakwazi ukuhlala eyedwa noma ngokusekela, ubambe ikhanda futhi uzokwazi ukula ukudla, uma engathandi
- umntwana waqala ukuphuza amazinyo
- hlakulela ukunyakaza kokuhlafuna
- umntwana usalokhu elambile ngemuva kokuncelisa, ubonisa isithakazelo ekudleni kwabantu abadala
Kufanele uqale kuphi ukukhanga?
Cishe eminyakeni engu-10-15 eyedlule, ukukhishwa kwaqalwa nge-semolina porridge, noma i-apula ijusi namazambane ahlambulukile. Manje izingane zakudala ziphethe umbono ohlukile: Kunconywa ukwethula ingane ukuba ihlanzeke emifino. Lokhu kunconywa kuchazwa ngalendlela elandelayo: emifinini kunamavithamini amaningi namaminerali, i-puree yemifino ayimnandi futhi ingane izoyidla ngokuzithandela kunemva kokuzijwayeza nge-sweetish fruit puree noma iphalishi.
Kudingekile ukuqala nge-puree eyodwa ye-component. Kungaba i-zucchini, i-cauliflower, i-broccoli - imifino ephansi ye-allergenic. Khona-ke ungazama izaqathe, ithanga, amazambane, i-turnips. Uma isikhathi sokudla kokuqala siwela ngenkathi okungenayo isitshalo semifino esisha (ebusika, entwasahlobo, ngisho nasehlobo ehlobo), kungcono ukuqala ngamazambane asemathinini asemathinini - okuhle manje kuyisinqumo esikhulu, ngoba asikho ukusetshenziswa emifinini yesiguli. Ngokuqondene nezimbiza, lesi seluleko - asithengi imikhiqizo eminingi kusuka kumkhiqizi ofanayo ngesikhathi esisodwa, thatha abaqashi bezinkampani ezihlukene, ngoba kungenzeka ukuthi ingane ingayithandi ukunambitheka kokuqukethwe embizeni, khona-ke uzokwazi ukunikeza okunye. Futhi ungakwazi ukunakekela ukukhanga kwesikhathi esizayo kusengaphambili bese ubanda imifino kusuka engadini yakho noma labo abaqiniseke ngakho.
Imifino ngayinye entsha iqala ukunikeza kancane-ngokuqondile ithisipuni, isanda kancane kancane isabelo. Ukuklama kufanele kunikelwe ngaphambi kobisi (ingxube), ekuseni. Kubalulekile ukuqapha ngokucophelela ukuphendula komntwana kumkhiqizo ngamunye omusha (isitokisi singashintsha, ukuqhuma kungavela). Ukuqaphela noma yikuphi okungahambi kahle, umkhwenyana kufanele ukhanseliwe futhi uphinde ujwayelane nakho kamuva. Ngemuva kokuzama izinhlobo ezimbalwa zemifino, iya ku-puree ye-two-component.
Kubalulekile ukukhumbula ukuthi akufanele ukhiphe lutho olusha uma ingane ingaguli, inemfiva noma indigestion, uma umuthi wokugonywa unikeziwe, uma izikhukhula ziphazamiseka.
Uhlobo olulandelayo lokudla lungaba yi-milk-free cereal (i-buckwheat noma ilayisi), isithelo se-puree, ijusi. Izithelo ze-puree nejusi kufanele zinikezwe ngokufana nemikhiqizo efanayo (i-apple sauce, i-apple juice, i-pear puree, i-pear juice). Uma ukhetha izithelo zokudla okuhambisanayo, kufanele uqaphele ukuthi ezinye izimila zihlanganisiwe, kanti ezinye ziba nomphumela wokuvuza emathunjini omntwana (ahlanganisiwe: i-pear, i-banana, i-briberibri, ipholile: i-apula, i-peach, i-plum).
Khona-ke imenyu yengane inwetshiwe ngenxa yemikhiqizo yobisi omuncu, inyama nenhlanzi i-puree. Ku-mash kanye nemifino ehlanzekile i-puree, amafutha we-sunflower ayengezwa, kanye ne-yolk yezinkukhu noma amaqanda ezigwaca.
Ngakho kancane kancane, inyanga nenyanga, ukudla komntwana kuyahlukahluka kakhulu. Inhlobo ngayinye entsha yokudla okuhambisanayo ishintsha ukudliwa nobisi lwebele (ingxube).
Kodwa, kungakhathaliseki ukuthi ingane ingadli kahle izilonda ezihlukene, ungayeki ukuncelisa, okungenani kuze kube yilapho umntwana eneminyaka eyodwa ubudala. Vumela ekudleni kwakhe ekuseni kakhulu kanye nokudla kokuhlwa kusihlwa kuzoba nobisi lomama. Manje uyazi ukuthi uzoqala nini ukunikeza izingane zokuheha.
Ukudla kwabantwana kwezingane
Yini ukupheka ingane ngodla
Ukudla okuncane emntwaneni
Ukupheka okulula futhi okusheshayo kusuka ku-cottage shizi
Indlela yokukhipha u-natoptysha ngosizo lwemithi yabantu
I-Horoscope ngo-December 2017 - i-Capricorn yowesifazane - evela kuTamara Globa no-Angela Pearl
UTom Hanks: Uhlosi ojabulayo
Izembatho zezingane ezifashisayo zonyaka we-2016: ukubuka ngokuningiliziwe izitayela nezitayela zesitayela
Indlela yokukhetha ukusika izingane: amabhodlela, abaphuza kanye nezinsipho
Isendlini yasekhaya yama-areques
Uyise kaJeannene Friske ulungele ukukhokhela ukubulala "umkhwenyana ongenakhaya"
Indlela yokukhetha izibuko zelanga
Cream cake nge raspberries
Ukulala okungapheli, ukwelashwa kokulala